Vaovao - Politika miantoka ny ady amin'ny valanaretina ho an'ireo orinasa hamerina ny asa sy ny famokarana ao amin'ny tanàn-dehibe iraisam-pirenena yiwu amin'ny taona 2020
Politika antoky ny ady amin'ny valanaretina ho an'ireo orinasa hamerina ny asa sy ny famokarana ao amin'ny tanànan'ny varotra iraisam-pirenena yiwu amin'ny taona 2020
Tahaka ny filazan'ny "fivarotana departemanta madinidinika anaty ranomasina" hoy ny tanànan'i yiwu, talohan'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohan'ny famokarana, nanambara ihany koa ny tanànan'ny varotra iraisampirenena yiwu ny fisokafan'ny tsenambola, ny Zone 1, ny faritra 2 dia nanomboka niasa. Fantatra fa mba hanampiana ireo mpiasan'ny faritany hiasa haingana araka izay tratra ary hampiroborobo ny orinasa hanombohana ny famokarana, ny tanànan'ny yiwu dia nanangana orinasa voalohany hiverina hiasa amin'ny vondrona mitarika.
Tamin'ny antoandro tamin'io andro io ihany, ankoatry ny fiara fitateram-bahoaka, vondrona miasa 10 no nalefa tany henan, anhui, jiangxi, shaanxi, yunnan, guizhou ary toerana hafa, lakilen'ny fifandraisana amin'ireo masoivohon'ny governemanta eo an-toerana, ny mpiasa ao amin'ny maso ivoho hanaovana ny miverina asa fitsangatsanganana, ary mampitombo ny fisarihana mpiasa vaovao.
Ataovy azo antoka ny famoahana ny tolo-kevitra
Ankoatry ny ady amin'ny areti-mandringana, ny orinasa dia tokony handray fepetra henjana amin'ny famahana ny olany, izay tsy fepetra ilaina fotsiny mba hampiorenana ny asan'ny mpianatra, hiarovana ny fivelom-bahoaka ary hikatsahana ny fampandrosoana, fa koa antoka matanjaka handresena ny ady ambasadaoro manohitra ny valanaretina. Fanohanana ny orinasam-panombohana, 16 Febroary, biraon'ny klioban'ny klioban'ny tanànan'i yiwu ary nandefa ny vahaolana mifandraika amin'ny aretin'ny aretina mikraoba coronavirus vaovao hahazoana antoka fa miasa ny orinasa, fanampiana ho an'ny satan'ny orinasa ary tombontsoa azo avy amin'ny mpiasa miverina amin'ny fahamarinana. ny seranan-tsambo, manosika ny orinasa multimode hisoratra anarana mpiasa vaovao sy ny sisa mba hahazoana antoka fa ny politika ankehitriny hametrahana tsirairay:
Omeo ny fanampiana ny fiara mifehy ny orinasa. Ny governemantan'ny tanàn-dehibe dia manome vola amin'ny alàlan'ny vola ampiasain'ny mpiasa sy ny mpiasa afovoany toerana eo amin'ny toerana niavian'ny orinasa haka sy haka ny mpanazatra mpizahatany na ireo fomba hafa fizarana ny fiara eo anelanelan'ny orinasa. .
Omeo ny fizakan-tena hamerenana ny fanampiana ara-bola ho an'ny mpiasa marina. Alohan'ny 22 Febroary, araka ny lalamby, ny lamasinina, ny fomba fitaterana ho an'ny mpiasan'ny orinasa, ny tapakilan'ny fiaran-dalamby dia mitaky vola fanampiana feno; Ho an'ny 23 febbb BBB 0 29 febroary ho an'ny mpiasan'ny orinasa, mampihena ny vola fanampiana. Ho an'ny fizotran-tena miverina any amin'ireo mpiasa marina, niverina talohan'ny 22 febroary, raha ny filazan'io faritra io ihany mba handray ny lalànan'ny lalamby hanomezana vola fanampiana, tsy misy fiaran-dalamby, ny fitsipiky ny trolley fitaterana entana; 23 Febroary solstice 29 Febroary mankany amin'ny fahamarinana, mampihena ny fanampiana ara-bola. Ho an'ny mpiasa taloha dia mitondra mpiasa vaovao ho amin'ny fahamarinana, amin'ny alàlan'ny fanamafisana orina ny tanànan'i yiwu, dia afaka mankafy ilay toerana milaza fa mameno koa. Ireo mitady asa voalohany dia manan-jo hanana telo andro maimaim-poana.
Ampiharo ny shuttle. Ho an'ny mpiasa sy ny mpiasa ao amin'ny orinasa sy faritra manan-danja indrindra, ny sampan-draharaha sy ny masoivohon'ny governemanta dia tokony hanome serivisy fiaran-dalamby manokana, serivisy fiaran-dalamby manokana amin'ny lalamby ary serivisy fiaran-dalamby manokana ho an'ny fiara matihanina. Ny governemantan'ny tanàn-dehibe dia miantoka ny vola feno amin'ny fanofana.
Omeo lalao feno ho an'ny orinasam-panompoana mpandraharaha. Raha mampiditra mpiasa ny orinasam-pandraharahana orinasa ary mandoa fiambenana ara-tsosialy arakaraka ny lalàna mifehy ho an'ireo orinasa tsy miankina amin'ny distrikanay, raha toa ka mampiditra mpiasa 5 eo ho eo ny orinasa isaky ny fotoana iray dia homena vola 500 yuan ny tsirairay amin'izy ireo. Raha olona 20 no ampidirina amin'ny fotoana iray dia homena vola 1000 yuan ny tsirairay amin'izy ireo.
Amporisiho ny orinasa handray mpiasa vaovao amin'ny lafiny maro. Ny faritra misy ahy dia tsy orinasa mpandray mpiasa vao sambany niditra am-pahamarinana mpiasa mpiasa mpianatra avy hatrany ary arakaraka ny fitsipika mandoa fiantohana ara-tsosialy, manome 1000 yuan / ny fanampiana ny olona.